Godina Addaa Naannawaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuutti, – Kichuu
HomeAfaan OromooTVGodina Addaa Naannawaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuutti,
Artist Jalatamtuu Alamituu Simee!
Fulaa page kenyaa #Like #Follow share godhaa.
ODUU IJOO Sad 12, 2020
Godina Addaa Naannawaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuutti, halkan keessaa sa’a 4tti poolisiin Humna Addaa Oromiyaa mana jireenyasaa seenuudhaan Barsiisaa Obsan Haayiluu jedhamu butanii dhabamsiisuu hiriyoonnisaa himan. Barsiisaa Obsan Haayiluu Araddoo hojii barsiisummaarratti bobba’ee kan jiraatu yoo ta’u, sochii qeerroo waggoota lama duraa keessatti ga’ee jabaa nama qabu ta’uufi bara bulchiinsa Wayaaane keessas dararamaafi hidhamaa ture jedhu hiriyoonni isaa.
Sadaasa 12.2020 poolisiin Humna Addaa Oromiyaa mana jireenyasaa isaa seenuun qabanii yeroo ammaa kana eessatti akkahidhamee jiru hin beekamu kan jedhan hiriyoonnisaa, haatii warraa Obsan yeroo dhihoo deessee mana kan jirtu yoo ta’u, isheefi daa’imasaa namni tajaajilu bira waan hin jirreef maatiin yaaddoo keessa jiraachuus dubbatu. Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu keessatti guyyyadhaa gara Guyyaatti sabboontonni hidhamuufi reebamuun akka malee hammaachaa dhufuu kan himu jiraataan magaalichaa, naannoo sanatti maqaa ‘Shanee qulqulleessuu’ jedhuun sabboontonni hedduun hidhaatti guuramaa jirus jedheera.
Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaa Araddaa Qerrensaa jedhamun bekkamutti Waraannii Murna dirqamaan biyya bulchaa jiruu, dargaggoo tokkoratti rasaasa dhukaasuun Miidha Cimaa irraan gahee jiraachu maddeen gabaasan.
Akkaa namni itti dhiheenyaan dhimicha hordofaa jiru tokko bilbilaan yaada isaa OMN’f laateetti Kaabinootaa fi Poolisiin humna addaa Oromiyaa walin tahuun Guyyaa kaleessaa Sadaasa 11/2020 Qeerroo maqaan isaa Tofiq Abdurubboo jedhamu Osoo inni hirriiba irra jiruu badii tokkoon maleetti Manatti itti seenuun Rasaasaan dhawanii jedha.
Dargaggoon dhahame kun yakka tokko hojjatee osoo hin taanee Oromoo tahuu isaa qofaafi kan jedhu maddi keenya kun,waytii ammaa Hospitaala Hiyoot Faanaa Magaalaa Hararitti gargaarsi yaalaa taasifamaafi akka jirus himame jira. Gama birootin Aanichuma kanatti Murni Humnaan angoo dhuunfatee biyyattii bulchaa jiru Dargaggoota dirqisiisuun akka waranatti makaman gochaa kan jiran yoo tahu, namoonni dirqama kana fudhachuu didanis Ergamaa TPLF fi Shanee qabdu jechuun Reebicha iratti raawachuun Qabeenya isaanitis saamaa jiru jechuun OMN’tti himan.
Yeroo ammaa haalli naanicha keessa jiru yaaddessaa tahuun wal qabatee humnoonni Waraanaa baay’inaan Aanicha keessa bobba’uun Qeerroo magaalattii keessa jiran adamsaa Waan jiraniif, Sodaa qabanirraa kan ka’e Qeerrowwan heedduun naannicha gadi dhiisuun gara biyya somaalee baqachaa jirachun gabaafameera.
Qeerron Godina Shawaa Kaabaa hiriirri deeggarsaa Bilxiginnaan waammatte nu hin ilaallatu jechuun balaaleffatan. Lolli Tigraayi fi Bilxiginnaa giddutti geggeeffamaa jiru nu hin ilaallatu kan jedhan Qeerroon Salaalee waytiin kun yeroo itti caaseffama Bilxiginnaa sadarkaa Aanaatti gooxiifi tokko-jaheen jaarame ciccirru, hoggantoota siyaasaa Oromoo kanneen akka Jawar Mohammed, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Hamzaa Booranaa, Gammachuu Ayyaanaa fi kanneen biroo akka gadhiifaman dhiibbaa goonudha malee yeroo itti murna nu fixaa jiruuf hiriira deeggarsaa baanu miti jedhaniiru.
Itti Aansunis mootummaa Abbaa irree kan sirna gita bittootaa durii deebisuuf, Afaan tokkoo fi Amantaa tokko jiddu gala godhachuun sabaaf sablammii biyyattii walitti diinomsaa jiru ni balaaleffanna jedhan.
Itti fufuunis, Nuti Qeerron Salaalee Qeerroo Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda wajjiin tahuun sirna biyyattii gara diigumsaatti oofaa jiru kana ofirraa fonqolchuuf adda durummaan qabsaa’uuf qophoofneerra jechuun ejjennoo qaban beeysisanii jiru.
Xumura irratti hojjetaa mootummaas dabalatee dhalataan Oromoo kamuu saamicha maqaa deeggarsa Raayyaa Ittisaaf taasisuu jedhuun mootummaan mindaa hojjettootaa irraa ciruu jalqabe kana uummanni Oromoo guutuun ejjennoo tokkoon dura dhaabbachuu akka qabu dhaamataniiru.
Magaalaa Finifinneettii Mootummaa abbaan irree humnaan biyya bulchaa jiru hojattootaa mootumma kanneenn seektoroota garagaraa keessa dalagaa jiran irraa seeraan alatti mindaa isaanii kan ji’a tokko isiniif hin kafallu jechuun dararaa akka jirantu dhagayame.
Sababa gumaachaa Raayyaa ittisaa biyyaatiif jedhuun hojattoota hunda irraa fedhii isaaniitiin alatti dirqisiisuun mindaa ji’a kanaa irraa hambisutti jiran jechuun jiraataan Finifinnee irraa dubbifne kun bilbilaan OMN ‘tti himee jira.
Mootummaan Ummataa isaa irrattii Waraana labsee, nuun immo Loolaa fi diigumsa biyyattii irratti nu gargaaraa jechuun biyyaa kamittillee waan dhagayamee hin beekamneedha kan jedhu maddi gamasii dubbifne kun, ummanni keenna gama kamiinuu mootummaa shiftaa sa’aa barbaadetti waraana ummata ofii irratti labsu kana tumsuu hin qabu jechuunis waamicha godhee jira.
Godina Baalee Aanaa Sinaanaa fi Aanotaa hafan biroo hedduu keessatti kaadiroonni Bilxiginnaa birrii Miiliyoona 1.5 ol walitti qabaa jechuun deeggartoota isaanii hawaasa keessa bobbaasuun dirqamaan qarshii irra sassaabuuf yaalaa jiraachuun gabaafame. Gandoota baadiyyaa keessaa yoo xiqqaate birrii Kuma 50 walitti qabuuf kan karoorfatan yoo tahu hawaasa dirqamaan waltajjii yaamuun doorsisaa jiru jedha maddi keenya Baalee irraa yaada isaa OMN’iif laate.
Akkuma Amaarri Mootummaa kana cinaa dhaabbatan, isin Oromoonis waliin dhaabbachuu qabdu jechuun ummata burjaajeessaa kan jiran yoo ta’u, Qeerroon Baalee ammoo gocha kana cimsanii kan balaaleeffatan ta’uu eeran. Ammaaf ammaatti diinni keenya jalqabaa kan mataa keessa dhahee ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru mootummaa heer-maleessa kana waan taheef Ummanni keenya Bilxiginnaa ofirraa dhahee cabsuu qaba malee cinaa dhaabbachuu hin qabu jedhan.
Gama dinagdeetiin murni kun kufeeti jira waan ta’eef Ummanni kun tooftaa Abiyyiif fakkaattoonni isaa fayyadamaa jiran kana harkatti fashaleessuu akka qabus waamicha godhanii jiru..
Murna kana cinaa dhaabbachuu jechuun, Ilmaan Oromoo Rasaasa murnichaatiin dhumaa jiran irratti cubbuu raaw’achuu fi harka ofiitiin of nyaachuu dha waan taheef Ummanni Oromoo dhimma kanarratti ejjennoo qajeelaa qabachuu qabas jedhan.
Harargee Bahaa Magaalaa Dadari fi Aradootaa isii heedduu keessatti murni Afaan Qawweetiin biyya bulchaa jiru akka Raayyaa Ittisaatti dabalamuun Uummata Tigraay fi sirna federaalizimii lolaniif dargaggoota dirqisiisaa jiraachuu maddeen gabaasan.
Jiraatootaa jidduu namni bilbilaan Magaalaa Dadar irraa qunnamne tokko akka jedhutti lola murna TPLF’n nurratti baname kana of irraa qolachuuf namuu gahee mataa keessani bahuu qabdu jechuun Dabballoonni sirnichaa fi Waraanni hawaasa wal gahii yaamuun Araddootaa hundarraa nama kudha shan Waraanaaf kennaa jechuun hawaasa dirqisiisaa jiru jedha.
Nuti Ilmaan Oromoo lola humna quufe lameen jiddutti gaggeefamaa jiruuf maaltu aarsaa lubbuu teenyaa nu kaffalchiise jechuun namoota komii dhiheessanis funaananii mana hidhaatti guuraa jirachuu dubbata maddi keenya kan magaala Dadar irraa OMN bilbilan dubbise.
Lolli amma deemaa jiru lola ristii Nafxanyootaa deebisuuf Tigraayi fi walumaa galatti mooraa federaalistoota irratti baname waan taheef ummatoota eenyummaa ofiitiin jiraachuu barbaadan maraan mormamuu qaba jechuun hayyonni siyaasaa Oromoo irra deddeebi’uun ibsaa jiraachuun beekamaa dha.
Tajaajilli Oduu Sudaan (SUNA) akka beeksisetti, lammileen Itiyoophiyaa baayyinaan kuma saddeetitti dhihaatan daangaa ce’uun, sababa waraana baqachuutiin biyya Sudaan bakka Al-Gadaariif jedhamu qubaatanii jiru. Lammileen Itiyoophiyaa waraana Tigiraayifi Mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti deemsifamaa jiru baqachuudhaan Sudaanitti baqachaa jiran.
Baqattoonni kun guyyoota muraasaa asitti baayyinni isaanii hedduu dabaluu danda’a jedhamee waan tilmaamamuufis, aanga’ootni Naannoo Al-Gadaariif fi komishinii baqattootaa Sudaan qindoomima waliin ijaarrachuudhaan iddoo qubannaa fi deeggarsa nyaataafi uffataa qubattoota kanaaf qopheessaa akka jiran Tajaajilli Oduu Sudaan kun gabaaseera.
Dhaabbilee Miti-Mootummaa dhimmoota baqattootaa kanaaf hundaa’anii mootummaa Sudaan waliin hojjechaa jiran kun baayyinni namoota gara Sudaanitti baqachaa jiranii guyyoota muraasa booda nama kuma dhibba lama (200,000) ta’uu mala jechuun tilmaamanii jiru.
Akka Tajaajilli Oduu Sudaan jedhetti, namoota sababa walwaraansa mootummaa Federaalaafi Mootummaa Naannoo Tigiraay gidduutti adeemsifamaa jiruuf jecha, Qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’anii godaanan keessatti, daa’imman, Dubartootaafi Maanguddoonni ni heeddummatu.
Dhimma lammilee nagaa biyyattii sababa lola kanaatiin, ajjeefamaa jiraniifi buqqa’aa jiraniirratti Mootummaan Itiyoophiyaa hanga yoonaa homaa hin jenne. Ta’us miidiyaaleen Addunyaa garaagaraa dhimmichaaf uwwisa kennuun qisaasama guddaan Dhaqqabaa jiraachuu Ibsaa jiru.
Kanumaan wal qabsiisuun Dhaabbanni Biyyoota gamtoomanii sodaa waraana kanarraa qabu ibsachuudhaan, fuulduratti walwaraansi kun yoo mariidhaan hin furamin dafee tasgabbaa’uunsaa na shakkisiisa jechuun sodaa qabu ibsatee jira.
Fuulduratti sababa waraana kanaatiin namoonni Qe’eesaaniirraa buqqa’aan namoota Miliiyona 9 ol ta’uu malu jechuun dhaabbanni kun bsee jira. Dhaabbanni United Nation (UN) gaaga’amni waraana kanaa jireenya lammiilee nagaa hedduu kan miidhuufi nageenya gaanfa Afirikaaf hedduu yaaddessaadhas jechuun, ammas waraana caalmaa marii akka furmaataatti qaamota wal waraannaa jiraniif akeereera
OMN : ODUU IJOO (SAD 12/2020)
ABOtti aansitee waanti habashaan sodaattu inni guddaan keewwata 39 mirga foxxoquu naannooleefi keewwata 49 mirga faayidaa addaa magaalaa Finfinneerraa qabnudha.Wayyaanee gaafa cabsan tarkaanfiin itti aanu heera biyyattii jijjiiruu ykn warreen kana haquudha.Kana waan yaadaniif warri habashaa dursitee ABO balleessuu qabda,Wayyaanee caalaa tsere xoophiyyaa kan tahe ABO’dha jettee ganamaafi galgala iyyaa jirti.ABO wayyaanee/gooftaa opdoyyuu cabsuus tahe balleessuu dadhabde,ilmishee cabsuu hindandeessu.
These statements sound a lot about how Abiy and his group are in a high tension! There is nothing shame than telling lies in a war front! He told us they controles Shirato a day a go! But now crying and conspiring as usual! Abush, ayizo gifa! Balew belew yemiluh yibeluhal alebeleziya!